Ibekwe ngasemva kwendlu enkulu ngasemva kwepropathi, eli gumbi lipholileyo nelipholileyo linomnyango owahlukileyo, indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato, ipatio egqunyiweyo, ikhitshi esebenzayo, indawo yokuhlala, igumbi lokulala elitofotofo (ibhedi yenkumbulo yokumkanikazi) kunye nebhafu epheleleyo. Impahla ihlanjwa nendlu enkulu. Yonwabela i-oasis yakho enoxolo kwiibhloko ezimbalwa ukusuka kwi-Grand Avenue Greenway, nokufikelela ngokulula edolophini, kwindawo zokutyela, kunye nekhampasi yaseWSU engaphezulu nje kwemayile!
Olu lulongezelelo lwezindlu ezisemthethweni ze-MIL emva kwendlu enkulu (inye kuphela udonga lwegumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo nendlu enkulu, ngoko uya konwabela ukuba bucala ngokupheleleyo). Indawo yokuhlala epholileyo inetafile yekofu yokuphakamisa umsebenzi okanye indawo yokutya, kunye ne-40 "i-TV ene-Netflix kunye nezinye iinketho. Ikhitshi esebenzayo inayo yonke into oya kuyidinga kwizidlo ezilula (i-oven yi-24", musa. t zama ukulingana nepizza yosapho): i-cookware, i-dishware, i-toaster, i-microwave, kunye neketile yeti, i-k-cup brewer kunye ne-french press. Phantsi kweholo kukho igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye negumbi lokulala elinomandlalo okhululekileyo we-queen memory foam, iilinen ezisemgangathweni kunye ne-comfort down efudumeleyo. Kukwakho ibhedi kunye neelinen zamawele zondwendwe olunye olongezelelweyo olukhoyo. QAPHELA: Ukuze iindwendwe zibe noxolo lwengqondo sithobela imigaqo-nkqubo yokucoca ka-Airbnb, equka ukuhlamba zonke iilineni (kuquka iingubo, iingubo zeduvet, iikhethini zeshawa, iitawuli), ukucoca kunye nokukorobha yonke imigangatho, kunye nokubulala iintsholongwane kuzo zonke iindawo eziphezulu phakathi kweendwendwe. Silusapho olugonywe ngokupheleleyo yi-Covid.
40" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix
Sikwindawo ezolileyo, enobuhlobo nosapho malunga neemayile ezi-1.2 ukusuka kwikhampasi yaseWSU. Kukho ipaki elungele abantwana ibhloko enye kude kunye nesikolo samabanga aphantsi ezibhloko ezimbini kude.
I am a piano teacher, married with two children, who likes to backpack, tinker with home repair, read, and I can't turn off any of the Lord of the Rings movies whenever they're on tv.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pullman